ameli, l'Assurance Maladie 12.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 12.0.0 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား က်န္းမာေရး & ႀကံ႕ခိုင္ေရး ameli, l'Assurance Maladie
ameli, l'Assurance Maladie ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တစ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို download လုပ်ပါကသင်၏ပြန်ဆပ်ဖို့တွေအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ထစ်ငေါ့ကိုလိုက်နာလိုပါသလား? အကောင်အထည်ဖော်မှု ameli နှင့်အတူသင့်အကောင့် ameli အပေါငျးတို့သစိတ်ကြိုက်ပျော်မွေ့!
သင်၏လူမှုလုံခြုံရေးနံပါတ်နှင့် pin ကိုကုဒ်တွေနဲ့သင့်အကောင့်ကိုဝင်ရောက်:
- သင့်ကိုလစဉ်ပြန်ဆပ်ဖို့တွေအတွက် Download
- သင့်အခွင့်အရေးများလက်မှတ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်စရိတ် Download
- သင့်အလုပ်ထစ်ငေါ့ Follow
- သင့်ဥရောပကနျြးမာရေးအာမခံကဒ် (EHIC) မှာနှင့်သင့်စမတ်ဖုန်း / တက်ဘလက်ပေါ်မှာရှုမြင်
- လူမှုရေးအကူအညီများရန်သင့်အခွင့်အရေးများများ၏ခြင်း simulation ဖို့ Access ကို
- တိုက်ရိုက်တိုင်ပင်ဖို့က e-mail ဖြင့်သင့်ရဲ့မေးခွန်းများကိုမေးပါ
ပြင်သစ်ကျော် directory ကိုကနျြးမာရေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေး
- သင်တို့ပတ်လည်ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးကျန်းမာရေးစက်ရုံ Find နှင့်၎င်းတို့၏နှုန်းထားကိုတွေ့မြင်
- သင့်လုံခြုံရေးအတွက်ကဒ်ကို update သို့မဟုတ်သင့်လက်မှတ်များ print ထုတ်မှကိုသင် terminal ကိုအနီးကပ်ဆုံး Locate
ameli, l'Assurance Maladie အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ameli, l'Assurance Maladie အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
ameli, l'Assurance Maladie အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
ameli, l'Assurance Maladie အား အခ်က္ျပပါ
bill-power စတိုး923.25k
ameli, l'Assurance Maladie ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း ameli, l'Assurance Maladie အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 12.0.0
ထုတ်လုပ်သူ Caisse Nationale d'Assurance Maladie
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://assure.ameli.fr/PortailAS/portlets/popup/ConditionsUtilisation.jsp
App Name: ameli, l'Assurance Maladie
Release date: 2019-06-21 12:50:48
လက်မှတ် SHA1: BB:9D:F5:4C:54:48:89:40:C5:0B:C8:BF:19:2E:AB:2E:7B:1D:E6:F3
ထုတ်လုပ်သူ (CN): HUBERT CORRE
ameli, l'Assurance Maladie APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ